2.2. कागजी गोहो - Investigative Journalism Manual | Investigative Journalism Manual
> खण्ड > खण्ड पाँच > 2.	आफ्नै डेटाबेस कसरी तयार गर्ने ? > 2.2.	कागजी गोहो
शुरूका डकुमेन्टमा आफ्नो स्टोरीसँग सम्बन्धित जस्तो लागेका सबै जानकारी टिप्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, कुनै मानिसको सीभी भेटियो भने त्यसलाई राम्ररी हेर्नुपर्छ । त्यस सीभीमा उसले सबै वर्ष गरेका कामको विवरण नहुन सक्छ । कुन वेला उसले काम गरेको देखिंदैन भनी पत्ता लगाउनुहोस् । अंकगणित सम्बन्धी सीपको काम यहाँ आउँछ । उसले विभिन्न ठाउँमा काम गरेको वर्ष जोड्नुहोस् र उसले कति वर्षको अनुभव छ भनी दाबी गरेको छ त्योसँग तपाईंले जोडेर निकालेको वर्ष मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुहोस् । उसले कुनै कम्पनीको पद अचानक छाडेको थियो कि भनी हेर्नुहोस् । त्यस सीभीले उसले काम गरेको ठाउँका बारेमा थप जानकारी फलानो डकुमेन्टमा पाइन्छ भनी संकेत गरेको हुनसक्छ । उसले फौजदारी अपराध गरेको रहेछ भने सो कुरा उसले काम गरेका संस्थाका मानव संसाधन शाखामा उल्लेख हुनसक्छ । सरकारी निकाय रहेछ भने उसलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि सामान्यतया अयोग्य÷योग्य हुने गरी बर्खास्त गरिएको हुनसक्छ । यसका आधारमा प्रहरी कार्यालय, अदालत र जेलमा भएका उसँग सम्बन्धित रेकर्ड हेर्नुपर्ने हुनसक्छ । अर्काे शब्दमा, एउटा डकुमेन्टले तपाईंलाई यस विषयसँग सम्बन्धित थप जानकारी÷प्रमाणका लागि अर्काे डकुमेन्ट हेर भनी संकेत गरेको हुनसक्छ ।
आफ्नो स्टोरीका लागि कुन डकुमेन्ट सान्दर्भिक हुन्छ र कुन असान्दर्भिक हुन्छ भनेर छुट्याइसकेपछि तपाईंले आफूले स्टोरी गर्न लागेको मानिसले जसरी सोच्नुपर्छ । उसले के कस्ता काम गरेको हुनसक्ला ? उसले फलानो काम गर्नुको सट्टा फलानो काम गरेको भए अथवा एउटाका ठाउँमा अर्काेलाई ठेक्का दिएको भए के फरक पथ्र्याे ? यसो गरेका खण्डमा नभएका÷नपाइने कुरा खोज्ने काममा फस्नु पर्दैन । धेरै वर्ष विदेशमा बसेको कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको परामर्शदाता नियुक्त भएको रहेछ र विदेश जानुअघि पनि उसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गरेको रहेनछ भने त्यस व्यक्तिले विगतमा गरेका कामका बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी नभेटिन सक्छ । यस्तो वेलामा उसम्बन्धी जानकारी विदेशमा खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
रेकर्ड राम्ररी राखिएको छ भने कुनै मानिसका बारेमा खोज्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले उसको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र वा चालक अनुमति प्रमाणपत्र खोज्नु राम्रो हुन्छ । मानिसका बारेमा जानकारी खोज्नका लागि अनलाइन डेटाबेस पनि उपयोगी हुन्छन् । अहिले धेरै पत्रपत्रिका र नेपाल राजपत्र अनलाइन राखिएका छन् । प्रेस काउन्सिलले धेरै पत्रिका स्क्यान गरेर कम्प्युटरमा राखेको छ । यिनबाट धेरै जानकारी पाउन सकिन्छ । प्रायः सबै कार्यालयका वेबसाइट छन् । व्यक्तिले पनि ब्लग बनाएका हुनसक्छन्, सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका अकाउन्ट हुनसक्छन् । तपाईंले जसको जानकारी खोज्नुपर्ने हो उसले वास्तविक नाम प्रयोग गरेको रहेछ भने उसको नाम समाचारमा खोज्दा पनि उसले कुन विश्वविद्यालय पढेको हो जस्ता थप जानकारी पाउन सकिन्छ । बैंक, कम्पनी, सरकारी कार्यालय, व्यक्ति जस्ता विषयमा धेरै समाचार आएका हुनसक्छन् । पत्रिकामा हकदावी गर्न आउने, अख्तियारनामा, नाम परिवर्तन गर्ने, विवाह, मृत्यु, धितो लिलाम बढाबढ टेन्डर, बरामद भएका÷दाबी नगरिएका सामान जस्ता विषयमा विज्ञापन छापिएका हुनसक्छन् । यिनमा पाइने स–साना जानकारी जोड्दा आफूले अनुसन्धान गरिरहेको विषयको पूर्ण चित्र तयार हुनसक्छ ।